URoberto Segura. I-Biography kunye nabantu abadumileyo | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | IiComics, Imbali yoncwadi
URoberto Segura wayengomnye omkhulu iikhathuni de la Ubudala begolide obuhlekisayo eSpain. Sele ndiyichazile kwelinye inqaku, kodwa namhlanje ndizinikezela ngokukodwa. UMdali URigoberto Picaporte, isidanga esikhulu o Iinkosi zeAlcorcón kunye ne-lazon Pepon, Kwityala lakhe unabalinganiswa abaninzi kunabo kuthi abaneminyaka yobudala esiyikhumbula ngothando. Kukho ukuya kuphononongo.
Le khathuni yaseCatalan obunye bobuthathaka bam kunye noIbáñez, uEscobar, RAF o IPurita Campos. Uzalwe e Badalona NgoFebruwari 14, 1927, wayengumbhali kunye nomzobi wekhathuni kwaye wayengowesizukulwane esiqaqambileyo sabapopayi abangama-57 ababenendlu yokupapasha eyintsomi Bruguera. Kwakuloo nyaka xa wayedonsa amaqweqwe akhe okuqala ngombala kwaye egxile kuthotho abalinganiswa bemveli kunye nemixholo, Leyo ezibonisa ngelixa satirizing uluntu Spanish ye 60s kunye 70s. Kananjalo kokuba ifike 80s kunye YeMuchamarcha, Ukuchazwa ngokutsha kwexesha elifanelekileyo kwezihlobo zakhe eziqhelekileyo zabahlobo ezaqala Iqela lemigcobo o Iqela lemigulukudu.
Ukususela kubizo lwakwangoko, eneminyaka eyi-14 wayesele ebhalisile Isikolo saseBarcelona sobuGcisa kunye neMisebenzi yoBugcisa. Ukusuka apho, emva kokusebenzisana kumaphepha-ndaba, wangena kwizitudiyo zaseMacián, ezazinikezelwe kwimveliso yeekhathuni. Yayiyinto engenanto eyimfuneko ukufika eBruguera, apho waphuhlisa khona umsebenzi wakhe oqaqambileyo njengomdwebi wekhathuni ecaleni kwamagama aphambili kunye neyona mikhulu kwiikhomikhi zaseSpain.
Into endisayithanda kakhulu U-Segura, ngaphandle kwe ukubetha ngamandla kunye nokubonisa kwimizobo yakhe, emikhulu ukukwazi ukubonisa ezo meko zemihla ngemihla. Umzekelo, kwiintsapho zamabali akhe ahlekisayo kwakusele kukho ubudlelwane obusondeleyo, ukubonakaliswa koluntu olwaluza kuvulwa kwidemokhrasi esondeleyo.
Abalinganiswa kunye nothotho
URigoberto Picaporte, isidanga esikhulu
Es mhlawumbi isimilo sakhe esikhunjulwa kakhulu. Ndiyenzile ngaphakathi 1957, apho yayivela khona kwiphephancwadi Ubhontsi. Emngciphekweni wokuwela kuhlobo olulula ngenxa yemeko yomlinganiswa ophambili, uSegura wabanika abalinganiswa kunye neemeko isigqebelo. Kwaye nangona elahlekile ngonaphakade, ngalo lonke ixesha sifunda umdlalo ohlekisayo kaRigoberto sicinga ukuba ngeli xesha liza kumhambela kakuhle. Umzobo wakhe, webachelor yeminyaka ephakathi, esele ikhule ngakumbi kunabancinci kwaye ingathandeki, ichukunyiswa kukunyamezela kwakhe ekutshateni intombi, UWarbler Cencérrez, owayehlala ephethe umpu UDona Abelarda, Umama wakhe. Kwaye, ewe, bekungekho ndlela.
Kodwa uSegura, njengaso sonke eso sizukulwana seekhathuni, kwafuneka azinikele kuye uthotho olwahlukeneyo kwangaxeshanye ukuziphilisa ngoxolo lwengqondo. Umzamo ubabonelele nge ubuchule obungenakuthelekiswa nanto borhwebo. Kwaye kwinqanaba lezikolo ezinkulu zaseYurophu, kodwa ngaphandle kokufumana ukuqondwa okufanayo kunye nodumo lwamanye amazwe.
Iinkosi zeAlcorcón kunye nePepon eyonqenayo
Kuvele ngaphakathi 1959 en Malume Uyaphila kwaye bakhunjulwa kakhulu. Kunokuthiwa basesefashonini, kuba ngubani ongenawo okanye owaziyo umlamu UPepon? Kwaye yile Pepon liphupha elibi UArturo Alcorcon, Umsebenzi waseofisini onamabhongo entlalontle kunye nobungcali, ekufuneka ejongane naye, i-hobo eyonqenayo ethi, ukuyikhupha iArturo, ikhuseleke ngudadewabo, omthobelayo kwaye amkhusele ngokugqithisileyo.
IQela leMerry - IPanda- iLos Muchamarcha
Kubafundi abancinci, bekukho ezi zihange zabahlobo kunye ne-antics zabo zobuntwana kunye nolutsha uSegura oguqukayo kule minyaka kunye neemeko zentlalo.
Piluca, intombazana yanamhlanje (1959) - lily (1970)
Mhlawumbi intandokazi yam, yayiyindalo yakhe ejolise kubaphulaphuli ababhinqileyo abafunda iimagazini ezinje ngoLily. Ixelele ezobuchwephesha kunye nokungahambi kakuhle kwamantombazana amabini anomlingiswa ofanayo kunye nendlela yokuhamba.
Abanye abalinganiswa naboUCaptain Serafín kunye nenkwenkwe yakhe yasekhabini uDiabolín o Pepe Barrena okanye ULaurita Bombón, unobhala wolwalathiso.
Segura udlule kwi-Premià de Mar, ngo-Disemba 2008.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » IiComics » URoberto Segura. I-Biography kunye nabantu abadumileyo